Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Ny mpamokatra tsara indrindra amin'ny fitaovana fandroana
Ny singa tsirairay ao dia tokony hisy haitraitra. Raha toa ianao ka mikasa fanavaozana ary mikaroka zavatra toy izany vidin'ny efitra fandroana na fitaovana tsara indrindra ho an'ny koveta fanasan-damba, manoro hevitra anao izahay mba hifantoka amin'ny Aquatica.
Inona no atao hoe Aquatica?
Aquatica dia iray amin'ireo toeram-pivarotana trano fandroana an-tserasera azo itokisana indrindra ary mpanamboatra za-draharaha amin'ny singa manan-danja rehetra amin'ny efitra fandroana. Izy ireo dia manangona ny ekipa tsara indrindra amin'ny injeniera, mpamorona ary mpanao asa tanana mahay indrindra mba hamorona fitaovana fandroana ambony indrindra. Niorina tany Kanada izy ireo, saingy any amin'ny firenena eoropeanina daholo ny orinasany. Mety hanontany tena ianao hoe nahoana ianao no tokony hifidy ity orinasa ity. Tsotra ny valiny:
izy ireo no nahazo laza malaza mpamokatra entana isan-karazany ho an'ny efitra fandroana
manana patanty maro momba ny teknolojia sy fitaovana mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny manampahefana mifehy izy ireo
manolotra fiantohana feno amin'ny vokatra azony mandritra ny 25 taona izy ireo
marin-toetra amin'ny mpanjifa izy ireo ary tsy mangataka fandoavam-bola fanampiny
manana hevitra tsara maro avy amin'ny tena mpanjifa amin'ny sehatra isan-karazany izy ireo
afaka manampy anao hamaha olana amin'ny fomba matihanina sy haingana ny birao mpanohana azy
Ity lisitry ny tombony Aquatica ity dia tsy feno, fa tokony ho ampy ny manome toky anao fa ity orinasa ity dia mpitarika eo amin'ny tsenan'ny fitaovana ara-pahasalamana.
Inona avy ireo karazana vokatra ho an'ny efitra fandroana azonao vidiana amin'ny Aquatica?
Tsara ny karazan'ny entan'ny Aquatica. Afaka misafidy amin'ny karazana maro ianao:
Aquatica dia manolotra modely isan-karazany, loko, akora ary vita ho an'ny entana rehetra azony entina. Raha handravaka ny efitra fandroanao amin'ny entana avy amin'ny Aquatica ianao, dia mendrika ny vola madinika rehetra izany.